SUDAN: Al-Bashiir oo bil walba qaadan jiray 20 milyan dollar oo mushaarkiisa ka baxsan - Calanka.com
Baarayaasha kiiska madaxweynihii hore ee dalka Sudan Omar al-Bashiir ayaa shaaca ka qaaday in ay soo ogaadeen in madaxweynuhu uu bil walba u qaadan jirin lacag 20 milyan oo dollar ka badan taas oo ka baxsan mushaarkiisa madaxweynenimo ee uu dalka xaqa ugu lahaa.
Waxa ay sheegeen baarayaashu in muddo tobonaan sano ay lacagtaasi madaxweynaha ugu dhici jirtay akoon uu ku lahaa bangiga “Omdurman National Bank”, waxaana ay lacagtaasi ka imaan jirtay bil walba shakhsiyaad iyo hay`ado dibedda ah.
Lacagtan ayay sheegeen in aysan soo mareysay shabakad la abaabulay taas oo qaabilsaneyd soo ururinta lacagaha dibedda, sida ay warbixin ay soo saareen ku sheegeen baarayaasha.
Lacagta uu mushaar ahaan u qaadan jiray madaxweynaha ayaa u dheereyd lacagtaasi,waxaana iyana lagu sheegay malaayiin dollar.
Warbixintan ay soo saareen baarayaasha ayaa aad looga hadal hayaa gudaha dalka Sudan.
Xilligii uu madanweynaha lacagahaasi qaadan jiray waxaa ay shacabka Sudan intooda badan ku sugnaayeen xaalad dhaqaale oo xun, waxaana ay qaarkood ku adkaa helidda cunto, biyo nadiif ah iyo caafimaad.
Mid ka mid ah qareenada u dooda madaxweyne al-Bashiir ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynuhu uusan wax saas ah kala socon dhaq-dhaqaaqyada akoonkan ay lacagtu kuso dhici jirtay, aqoon badan uusan u laheyn.
Si kastaba, dhaqaalahan ayaa akoonka bangiga ugu soo dhacayay madaxweyne al-Bashiir ilaa bishii april ee sannadkii tagay 2019, xilligaas oo laga tuuray xukunka, xabsina loo taxaabay.
R/wasaare markii saddexaad arooskeeda u baajisay shir dartiis
Hindiya oo qabatay Shimbir “basaasnimo” ay uga shakisantahay iyo dalka Pakistan oo laga yeeshay
Madaxweyne Trump oo saxiixaya sharci hakinaya soogalootiga Mareykanka